Kodi 19.1 inosvika ichiruramisa madudu ekutanga eMatrix | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo ndanga ndichishandisa XBMC, ndinofunga iri software yandinoda uye yandinovenga. Ndinochida pane zvese zvachinogona kupa, asi ndinozvivenga nekuti akawanda mawedzero anogona kumira kushanda chero nguva uye mamwe eanoshanda nemazvo, zvinoenderana nezvekunze zvirimo, zvinogona kukonzera kuti software ishande. Ichokwadi ndechekuti matambudziko aya haana hukama ne software yacho pachayo, asi chirongwa ichi chatove akakanda Kodi 19.1 kugadzirisa zvinoenderana navo.
Kana zviri izvo zvisiri kwavari, Kodi 19 Matrix chiri kunge chiri chakashata. Ivo vakaita kusvetukira kuPython 3, vakadonhedza rutsigiro rwechipiri vhezheni yemutauro wechirongwa, uye vagadziri veadon havasi kumhanyisa sezvavaifanira, saka kune vazhinji vakamira kushanda. Iyo software pachayo yakaunzawo mabugs, senge chero hombe kuvandudza, uye Kodi 19.1 yatanga kuvatarisira. Pazasi iwe une iyo nyora pamwe nhau izvo zvauya pamwe neshanduro iyi.
1 Chii chitsva muKare 19.1 Matrix
2 Inowanikwa izvozvi, munguva pfupi pane yako Linux kugovera
Chii chitsva muKare 19.1 Matrix
HDR metadata ikozvino yaonekwa muVP2 Mbiri 9 hova uye inogona kushandiswa pamapuratifomu anotsigira HDR passthrough kana toni mepu kana uchitamba mavhidhiyo eHDR.
Yakagadziriswa optical DVD kutamba paLinux uye Blu-ray BD-J chitsauko kusvetuka kuburikidza nema controllers / keyboard
Zvemukati menyu hazviwanikwe mune iyo PVR Nhungamiro hwindo kana uchishandisa chaicho chakanyanya controller kudzora Kodi.
Iyo yevatengi chiteshi zita uye nhamba hazvirambe zvichichinja.
Mutambo wekutamba uye tangazve chinzvimbo chekurekodha chakarasika mushure mekutanga zvekare Kodi.
Tsaona paunenge uchitsvaga EPG kana uchishandisa MySQL se EPG dhatabhesi.
Nguva yekurekodha kunotevera mu… label haina kuwanikwa muEstuary Timer / Timer mutemo hwindo.
Iyo manejimendi maneja haina kutumidza zita rekumashure chiteshi.
Kutamba kwechirongwa chakachengetwa hakusarudzwe kana uchivhura iyo Yekutungamira hwindo.
GUI haigadzirise painobvisa / kuisa / kuviga / kusaburitsa makwara echiteshi.
Yakagadziridzwa: Chitarisiko chePVR windows muEstuary chagadziriswa.
Yakagadziriswa nyaya ine cuesheets mumhanzi uko chete yekutanga track yaizowedzerwa kuraibhurari kana uchiongorora, kudzima iyo yese.
PVR - Yakagadzirisazve nhepfenyuro zvivakwa 'hastimer', 'hastimerrule', 'hasrecording', 'kurekodha' uye kudzoreredza chiteshi chivakwa 'isrecording'.
Fixed system font detection (directwrite) mumawindows eASS zvinyorwa, mushandisi font kuona (mu userdata / mafonti) yeASS zvinyorwa zvidiki uye kupa semi-pachena ASS zvinyorwa muWayland.
GUI / inowanikwa
Yakagadziriswa midhiya arcing yeDVD / BluRay.
Iye zvino Chorus2 yakavakirwa pamipiro yemunharaunda.
Iye zvino inogonesa default faira cache ye network faira masisitimu uye yakagadziridzwa faira cache kukanganisa kubata.
Kuvandudzwa kwekuvimbika kweHTTP neNFS network faira masisitimu
Tsigiro yeiyo WS-Discovery protocol iyo inobvumidza iwe kuti uwane maSMB maseva uye kutarisa akagovaniswa maforodha uchishandisa SMBv3.
Rekugadzirisa ruzivo OSD vhidhiyo. Inowedzera iyo yazvino mutambi dhigi info (Ctrl + Shift + O) nerutsva vhidhiyo-chete info (Alt + O).
Nedzimwe hova dzisina kujairika, isiriyo HDR metadata (HDR10 passthrough) inogona kupfuudzwa.
Green screen pane echinyakare HW masisitimu (maficha nhanho DX 9.1) kana uchiridza 10-bit vhidhiyo.
Nhema chidzitiro ine software yekupa nzira uye DXVA2 Hardware kumhanyisa yakaremara.
Green screen paunenge uchitamba menyu yemamwe maDVD (MPEG2 SD chete).
Kwakavimbika mapurisa emasina kuzivikanwa masheya eSMB.
Yakavandudzwa: VC nguva dzekumhanyisa dzakabatanidzwa mune yekumisikidza kuwedzera rutsigiro rweVS2019 uye VS2017 panguva imwe chete.
Fixed system-level yakaiswa SMB migove isingaoneke paKare uye SMB migove yakanyorwa nenhamba dzisinganzwisisike (UUIDs) pachinzvimbo chezita redisk chairo.
Iyi vhezheni inounzawo 19.1 kuXbox.
Inowanikwa izvozvi, munguva pfupi pane yako Linux kugovera
Kodi 19.1 Matrix akatoburitswa zviri pamutemo, saka ikozvino inogona kutorwa kubva kune yako website yepamutemo kana kutevedzera rairo yekuisa paLinux, inowanikwa pano. Munguva pfupi iyo vhezheni itsva ichasvikawo kuFlathub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kodi 19.1 inosvika ichiruramisa madhiri ekutanga eMatrix, ayo asiri mashoma nekuti iwo mutsva mutsva
Kwete PO akadaro
Pachine hapana rutsigiro rweChromecast, saka hazvibatsiri.
Kugadziriswa kusahadzika: Linux 5.10 LTS inotsigirwa kwemakore matanhatu, uye kwete zvishoma sezvayakambotaurwa pakutanga